ဆင်ဆာလျှော့ပေါ့ပေးလျှင် အနုပညာရှင်နှင့် အတတ်ပညာရှင်များ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းနှင့် တာဝန်ပိုင်း - Yangon Media Group
ဆင်ဆာလျှော့ပေါ့ပေးလျှင် အနုပညာရှင်နှင့် အတတ်ပညာရှင်များ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းနှင့် တာဝန်ပိုင်း
လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဆင်ဆာစနစ်ကို ဖြေလျှော့ပေးရန်အတွက် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတို့ ပူးပေါင်းကာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ အနုပညာလောကသား တွေ အင်မတန် တောင့်တနေကြတဲ့ ဆင်ဆာ လျှော့ပေါ့ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ပြုလုပ်သွားမှာပါ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလဲ ကျွန် တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက နေပြီးတော့ ရုပ်ရှင်လောကသားတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီ ဆင်ဆာလျှော့ပေါ့ပေးဖို့ ညှိနှိုင်းတောင်း ဆိုသွားမယ်။ လောကသားတွေအားလုံးကို သိစေချင်တာက ဆင်ဆာလျှော့ပေါ့ပေးတာနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှု အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များရဲ့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းနဲ့ တာဝန်ပိုင်းကလဲ ပိုမိုကြီးမားလာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်ဆာလျှော့ပေါ့လာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ ပိုမိုစောင့်ထိန်းပေးရမှာ တွေလဲ ရှိလာမှာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင်ဝိုင်းက ပြောသည်။
ဆင်ဆာနှင့်ပတ်သက်သော အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုအတွက် ကျင့်သုံးနေသည့် ဆင်ဆာမူခြောက်ချက်မှ ဆင်ဆာမူသုံးချက်ကို လျှော့ပေါ့ပေးရန်နှင့် ယင်းကဲ့သို့လျှော့ပေါ့ ပေးလိုက်သော ဆင်ဆာမူသုံးချက်ကိုလည်း နှစ်ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ကာ Rating စနစ် ကျင့်သုံးဖို့အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခင်က ဆင်ဆာမူ ၁ဝ ချက်ရှိရာ ရုပ်ရှင်အနုပညာလောကသားများ၏တောင်း ဆိုချက်အရ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆင်ဆာမူလေးချက်အား လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်
ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ဂျပန်ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများ အကြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ယုံကြည်မှု တ?
အနုပညာအပေါ် အပြည့်အဝ အာရုံစိုက်နိုင်ပြီ ဆိုတဲ့ ရဲတိုက်
ကယားပြည်နယ်၏ အလှကို မိုးပျံပူဖောင်းစီး ကြည့်ရှုနိုင်တော့မည်
ဌာနများအတွင်း အုပ်စုဖွဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုများ ရှိနေ၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ငါးကြီးကြီးများကိုေ
ပြန်လည် အသုံးပြု၍ရသော ဒုံးပျံဖြင့် ဂြိုဟ်တု ၆၄ လုံးကို အာကာသသို့ သယ်ဆောင်သွား
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိပါက ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ချို့ယွင်းနိုင်ပြီး ဥပဒေကို လေးစားလိုက??